LG Sensim Vs LG Optimus 2x | Androidsis
el_iulius | | HTC က, LG, reviews
မကြာမီကကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားစီအကဲဖြတ်ခဲ့သည့်နှစ်ခုဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုသီးခြားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းနှစ်လုံးကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည်။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်မှဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးပါက၊ Android နှင့်အတူဤ monsters နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အနည်းငယ် ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိလာလိမ့်မည်။ HTC အာရုံခံစားမှု Vs LG Optimus 2x။ တိုက်ခိုက်!
သူတို့ကိုပြင်ပကသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆို high-end ဆိပ်ကမ်း။ အဆိုပါ ၎င်း၏ချော၏အရည်အသွေးတွေကိုအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။ ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုစလုံးသည်သန့်ရှင်း။ ရှေ့မျက်နှာအသွင်အပြင်ကိုရွေးချယ်သည်။ screen digitizer သည် keypad သို့သက်ရောက်သည်။ နောက်အပိုင်းကိုပလပ်စတစ်နှင့်သတ္တုစပ်နှစ်ခုလုံးတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းမှန်သည်နေစဉ် HTC သည်ဒီဇိုင်းအရပိုမိုခေတ်မီပြီး LG တွင်ပိုမိုလေးနက်သောအရာရှိသည် သငျသညျ '' GoogleTM နှင့်အတူ '' ကိုဖတ်နိုင်သည့်သတ္တုတီးဝိုင်းနှင့်အတူ။
ဖန်သားပြင်အရ HTC Sensation သည်ပိုမိုကြီးမားသည်။ ၀.၃ လက်မနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသော resolution တို့ကအရာဝတ္ထုများကိုကြည့်ကောင်းစေသည်။ Optimus 2x ၏မျက်နှာပြင်သည် ၈၀၀ × ၆၀၀ TFT ဖြစ်ပြီး Sensation ၏ 800x600 pixel qHD LCD နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။, ငါသည်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ထင်ပါတယ် HTC သည်အားသာချက်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်။ သူတို့ကိုကိုင်တွယ်သောအခါအဘယ်သူမျှမသိသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သံသယမရှိဘဲ, အ ပတ် ၀ န်းကျင်အလင်းများဖြင့် HTC သည်အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ကင်မရာတွေမှာတော့ကွာခြားချက်သိပ်မရှိဘူး။ ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးတွင် 8MPx အာရုံခံကိရိယာများပါရှိသည်ဒါပေမယ့် HTC ၏ flash သည် Double LED ဖြစ်ပြီး LG ၏ flash သည် LED တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရှိသည် ရှေ့ကင်မရာဖြစ်သော်လည်း LG သည် HTC VGA ကင်မရာ၏ရှေ့တွင် 1.3Mpx ဖြင့်ရှေ့တွင်ရပ်နေသည်။ ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးအရခြားနားမှုလုံးဝမရှိပါ။ နှစ်ခုလုံးသည် FullHD 1080p ဖြင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းရှိသည် ပြင်ပမော်နီတာတစ်ခုတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်းကစားသောအခါအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါသင့်ကိုလှပစွာပျော်ရွှင်စေလိမ့်မည်။
ကျန်တဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲတွေအတွက်တော့ Processor ကိုအရင်နှိုင်းယှဉ်မယ်။ နှစ် ဦး စလုံးထည့်သွင်း dual-core ပရိုဆက်ဆာများ၊ LG သည် 1GHz Nvidia Tegra ဖြစ်သော်လည်း HTC က 1.2GHz Qualcomm ဖြစ်သည်။။ သူတို့က, သို့သော်, ဦး ဆောင်ပရိုဆက်ဆာနေကြသည် LG ကပိုပြီးစွမ်းအားကြီးတယ်။ dual-core နှင့်အမြန်နှုန်း (ပြောသောအခါဟုတ်ကဲ့) အကြောင်းကိုပြောသောအခါ Processor ကိုစွမ်းဆောင်ရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ အဖြစ် RAM ကိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီပထမ ဦး ဆုံးကြီးမားသောခြားနားချက်စတင်နေရာဖြစ်သည်။ The LG တွင် 512MB RAM သာ (Nexus One ကဲ့သို့ RAM နှင့်အတူတူ) ရှိပြီး Sensation သည် 768Mb အထိရှိသည်။ 256MB သည်၎င်းတို့ကိုတန်ဖိုးထားရန်သေချာသည် (၎င်းသည် HTC Sense 3.0 နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင် LG က 8Gb internal memory ပါဝင်ပါတယ်၊ ဒီမှတ်ဉာဏ်ရဲ့တစိတ်တပိုင်းကိုသိုလှောင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုခွင့်ပေးတယ်။ The HTC တွင် internal memory 1Gb ရှိသည်ဖုန်းကသင့်တော်တဲ့ application တွေကို install လုပ်ခွင့်ပေးမှာပါ။ ဤအပိုင်းကဏ္၌၎င်းတို့သည်အလွန်ပင်ဖြစ်သည်။ LG တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော processor နှင့် internal memory ပိုမိုကောင်းမွန်သော်လည်း Sensation သည်အလွန်နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီး RAM memory ပိုမိုများပြားလာပြီး၎င်းသည် system fluidity ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
La နှစ် ဦး စလုံးဆိပ်ကမ်းမှာဘက်ထရီလိုက်ဖက်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု (၁၀-၁၂ နာရီ) တစ်ရက်ထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ရန်မမျှော်လင့်ပါနှင့်သင်တစ်နေ့တာတွစ်တာကိုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်းကစားခြင်းများပြုလုပ်ပါကစွမ်းရည်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင် terminal ကိုအနိုင်နိုင်အသုံးပြုပါက၎င်းကိုဒုတိယမြောက်နေ့အထိရှင်သန်စေနိုင်သည်။ ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာဒီလိုပါပဲ၊ သင်အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါ ၁၀၀% ဘက်ထရီနဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားဖို့အားသွင်းပါ။
ယင်းကြောင့် LG ၏လည်ပတ်မှုစနစ်သည်အလွန်ဆုံးရှုံးသည်။ ၎င်းသည် Android 2.2 Froyo နှင့် HTC Sensation မှ Android Gingerbread 2.3.3 ကိုအသုံးပြုထားသည်။ Optimus 2x ကိုမကြာမီတွင်နောက်ဆုံးထွက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း Android အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြန့်ချိသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဤတွင် LG က၎င်းကိုဈေးကွက်သို့ပထမဆုံးတင်ပို့ရန်နှင့် Guinness ကိုစျေးကွက်ထဲရှိပထမဆုံး dual-core ဖုန်းသို့ရရှိရန်ဘာလုပ်ခဲ့သည်ကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။ Graphical environment အတွက် LG ကဘာမှလုပ်စရာမရှိပါဘူး။ Sense 3.0 ဖြင့် HTC သည်ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံလွှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည် Sensation ၏စွမ်းအားနှင့်အတူ SMS ကိုပင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးတွင်သင်၏ဂိမ်းများအတွက်သို့မဟုတ်သင်ပျင်းရိသောအချိန်များအတွက်အလိုရှိသောစွမ်းအားကိုရနိုင်သည်။ Gameloft HD (သို့) EA မှနောက်ဆုံးပေါ်ရွေ့လျားမှုပြproblemနာမရှိပါ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ အဲဒီပရိုဆက်ဆာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Optimus 2x ရမှတ်များသည် Quadrant Benchmark တွင်ရှိသည်။ အပြင် LG မှ HDMI output (ကေဘယ်ပါဝင်သည်) ၎င်းသည်သင့်အား HD ဗီဒီယိုများ၊ ဂိမ်းများနှင့်သင်၏မော်နီတာတွင်သင်လိုချင်သမျှကိုပျော်မွေ့စေသည် ၎င်းသည် LG ၏ကြီးမားသောအချက်ဖြစ်သည်။ Sensation သည် miniUSB connector မှတစ်ဆင့်ပြင်ပမော်နီတာတွင်ပြန်လည်ဖွင့်နိုင်ခြင်းရှိသော်လည်း adapter မပါ ၀ င်သော ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရဖို့ HTC ကိုတိုက်တွန်းပါတယ်။
ကျွန်တော့်အတွက်တစ်ခုရွေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး LG သည်ပိုမိုအစွမ်းထက်သည်, ဒါပေမယ့်လျော့နည်းမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူ။ ဒါပေမယ့် Sensation ကပိုပြီးလှတယ်၊ Sense ရှိတယ်၊ ပြီးတော့မျက်နှာပြင်ကထူးတယ် LG မှ ငါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Sensation ကို LG Processor, HDMI output နဲ့ internal memory နဲ့စပ်လိုက်မယ်။ ငါတစ်ခုခုကိုအကြံပေးလိမ့်မယ် ဤကိစ္စတွင်မည်သည့် terminal သည်စျေးနှုန်းသက်သာပြီးမည်သည့်နေရာကိုသင်ရွေးမည်ကိုကြည့်ရှုရန်သင်၏အော်ပရေတာ၏ကမ်းလှမ်းချက်များကိုသွားရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC Sensation V LG LG Optimus
ကျွန်ုပ်၏ Samsung Galaxy S2 ကိုသိမ်းပါ အတူတူနှစ်ခုထက်သာ။ ကောင်း၏။ 🙂
ငါ့အာရုံခံစားမှုနှင့်အတူ kedo ပါ ထို့အပြင် screen ၏ resolution သည်နိမ့်သောကြောင့် lg optimus 2x အနိုင်ရရှိသည်ကိုအခြေခံစံနှုန်းတွင်စမ်းသပ်သည်။ ဥပမာအဘို့, atrix lg ကဲ့သို့တူညီသော precessor k ရှိပြီး၎င်းသည် ram memory (1 gb) နှင့် qhd resolution ပိုများသော်လည်း၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများကိုရမှတ်များလျှော့ချစေသည်။
ငါသည်ငါ့ SGS2^^ စောင့်ရှောက်လော့
အခြေခံစံနှုန်းတွင် ၂၉၀၀ ခန့်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြေးဆွဲနိုင်ပြီးဒုတိယအကြိမ်မှာ ၃၅၀၀ ခန့်ဖြစ်သည်။
8 MPX ကင်မရာအပြင် 1,2 GHz dual-core၊ 1 GB RAM၊ 32 GB internal, SuperAmoled Plus မျက်နှာပြင် ...
သင် "ပေမယ့်" ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုသင်တည့်မတ်သင့်သည်
ငါ SGS2နှင့် LG Optimus x2 တို့နှင့်အတူနေမည်ဆိုပါကမယုံနိုင်စရာကောင်းသည်မှာ antenna gate ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤ HTC သည် Apple မှသင်ယူခြင်းမခံရသေးသောကျွန်ုပ်သည်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပျောက်ဆုံးခြင်းကိုအလိုမရှိပါ။ ကျွန်တော်မကြိုက်သည့်နောက်အချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတွင် internal memory အနည်းငယ်သာရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့် 8GB ရှိပြီး၎င်း Sensation တွင် 1GB သာရှိသည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တာက ၁ ရက်ထက်နည်းတဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းကဖြစ်ပါတယ်။
HTC Sensation = € ၆၀၀ အခမဲ့ဖြစ်သည်
LG Optimus X2 = € 450 Free တွင် HDMI cable ပါဝင်သည်
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် LG သည်၎င်း၏ Android 2.3.4 ကို update ပြုလုပ်ရန်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါမင်းကိုယူရို ၂၈၀ အတွက်အခမဲ့ခံစားခွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒါအသစ်ပဲ
ကျွန်တော့်ရဲ့ 2x Optimus ကိုဘာမှမပြောင်းပါဘူး ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပထမ ဦး ဆုံး cyanogen ၏ RC ရှိနေပြီဆိုလျှင်၎င်းသည် ပို၍ ပင်ကောင်းမွန်ပါသည်။
ဒီ Optimus 2x မှာအလင်းရောင်ရှိရင်တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဖြေမှာပါ။ .. ငါအမှောင်ထဲမှာဗွီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရင်> ?? .. အလင်းသည်သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီလား။ သို့မဟုတ်မရှိပါ .........salu2
Optusus 2x တွင်နောက်ခံအလင်းတွင်တပ်ဆင်ထားပြီးဗီဒီယိုများကိုအမှောင်ထုတွင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်
ငါသည်ငါ့ htc အာရုံခံစားမှု = D ကိုစောင့်ရှောက်
Android အတွက် web browser အသစ် Dolphin 6